ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မကွေး. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်း
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မကွေး. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့၊ မကြီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးကန်ကွင်းအမှတ် ၊ မကွေး-တောင်တွင်းကြီးကားလမ်းမဘေး မို ..